2020 DARYEELKA Lacag La Siiyey | Carewell SEIU 503
2020 DARYEELKA Lacag La Siiyey
Iyadoo loo marayo faa'iidada Carewell SEIU 503 CARES PTO, shaqaalaha u-qalma waxay heli karaan illaa 80 saacadood oo gunnooyin ah oo lacag-bixin ah. Waad u qalmi kartaa haddii aad lumisay saacado u dhexeeya Juun 1, 2020-Disember 31, 2020 mid ka mid ah shan sababood oo u qalma oo la xiriira COVID-19, waxaad shaqeysay ugu yaraan 40 saacadood oo ah saacado shaqo oo u qalma (sidoo kale loo yaqaan saacadaha gorgortanka), iyo waxaad ku haysaa foomka W-9 ee faylka ku jira Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka.
Halkan guji si aad u dalbato
Si aad ugu qalanto dheeftan, waa inaad:
Aad lumisay saacado shaqo oo u qalma oo udhaxeeya inta udhaxeysa Juun 1-Diseembar 31, 2020 sababtoo ah mid ka mid ah shanta sababood ee hoose; iyo
Ka shaqeeyey ugu yaraan 40 saacadood oo daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya bisha aad lumisay saacadaha daboolan mid ka mid ah sababaha hoose awgood; iyo
Hayso foomka W-9 ee faylka ku jira Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka.
Shuruud 1: Saacadaha shaqada ee lumay inta u dhexeysa Juun 1-Diseembar 31, 2020 mid ka mid ah sababaha hoose:
Waxaad qabtey kiis la xaqiijiyey oo ah COVID-19;
Waxaa kugula taliyay xirfadle caafimaad oo takhasus leh * inaad is karantiil ahaato sababtoo ah soo-gaadhista COVID-19 awgeed
Waxaad leedahay astaamaha COVID-19 waxaadna si firfircoon u raadineysaa baaritaan caafimaad oo xirfadle caafimaad oo takhasus leh.
Waxaad siineysaa daryeel shaqsi, kaasoo aad si sharci ah mas'uul uga tahay ama aad ula nooshahay, isla markaana ay ku xiran tahay karantiil ama amar go'doomin ah oo ku saabsan xirfadle caafimaad oo takhasus leh *; iyo / ama
Waxaad daryeeleysaa ilmo aad sharci ahaan mas'uul katahay dugsigiisa ama xaruntiisa xannaanada carruurta oo loo xiray taxaddarka COVID-19 mana jiraan shaqsiyaad kale oo aqoon leh ** oo diyaar u ah inay daryeelaan ilmahaaga (carruurtaada).
* Xirfadle caafimaad oo aqoon leh ayaa ah bixiye daryeel caafimaad oo shati u leh loona tababbaray bixinta adeegyada caafimaadka. Tan waxaa ka mid ah dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha dhakhtarka, kalkaaliyayaasha kalkaalisooyinka, iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee diiwaangashan. Ujeeddooyinka faa'iidadan awgeed, La xiriir Raad raacayaasha la shaqeeya maamulka caafimaadka bulshada ee maxalliga ah - sida Maamulka Caafimaadka Oregon - waxaa loo tixgeliyaa xirfadlayaal aqoon u leh.
** Qofka u qalma xanaanada cunugga waa qof weyn oo shati ama ruqsad la'aan ah oo aad ku kalsoon tahay inuu siiyo daryeel ammaan ah ilmahaaga. Tan waxaa ka mid noqon kara daryeel bixiyaha caadiga ah ee ilmahaaga, xarun daryeel shati, ama xubin qoyska ka tirsan.
Eeg qaybta Su'aalaha iyo Jawaabaha si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sababaha saacadaha shaqada u maqnaadaan.
Shuruudaha 2: waxaad ka shaqeysay ugu yaraan 40 saacadood oo daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya bisha aad lumisay saacadaha caymiska sabab u qalmidda.
Waxaa jira laba "tier" oo faa'iido leh oo la heli karo:
Ilaa 40 saacadood DARYEELKA PTO: Haddii aad shaqeysay 40-79 saacadood oo daboolan ugu yaraan mid ka mid ah saddexdii bilood ee la soo dhaafay oo aad la kulanto ugu yaraan mid ka mid ah shanta u-qalmitaanka ee kor lagu sharaxay, waxaad xaq u leedahay inaad hesho illaa 40 saacadood oo DARYEELKA PTO.
Illaa 80 saacadood oo ah DARYEELKA CARRUURTA PTO: Haddii aad shaqeynaysay 80 ama in ka badan saacado daboolan ugu yaraan mid ka mid ah saddexdii bilood ee la soo dhaafay oo aad la kulanto ugu yaraan mid ka mid ah shuruudaha u-qalmitaanka ee kor lagu sharaxay waxaad xaq u leedahay inaad hesho 80 saacadood oo ah DARYEELKA PTO faa'iidooyinka.
Waxaad gudbin kartaa wax kabadan hal dalab oo ah faa'iidooyinka CARES PTO. Si kastaba ha noqotee, haddii aad xaraysato wax ka badan hal sheegasho, waxaad u-qalantaa ugu badnaan saacadaha aad u-qalantay sheegashada koowaad oo aadan horay u helin.
Marka, tusaale ahaan, aan dhahno waxaad shaqeysay 60 saacadood oo daboolan bilaha May, June, iyo July, ka dibna lumisay 30 saacadood oo daboolan bishii Ogosto sababtoo ah mid ka mid ah shuruudaha u-qalmitaanka ee kor lagu sharaxay. Sababtoo ah shuruudaha saacadaha shaqada, waxaad u-qalmi doontaa ugu badnaan 40 saacadood oo ah faa'iidooyinka CARES PTO. Dacwaddaada bisha Ogosto, waxaad dalban kartaa illaa 30 saacadood (wadarta guud ee saacadaha aad lumisay bishaas).
Tusaalahan, haddii aad u baahan tahay inaad xareysato sheegasho mustaqbalka, waxaad heli doontaa ugu badnaan 10 saacadood oo aad adigu isticmaali karto - xitaa haddii aad shaqeysay 80 saacadood Sebtember, Oktoobar, iyo Noofambar. Maaddaama sheegashadaadii ugu horreysay (Ogosto), waxaad u-qalantay ugu badnaan 40 saacadood oo waxtar ah, taasi waa tirada guud ee saacadaha aad u-qalmi doontid muddada dheeftan ah.
Tusaale kale ayaa ah haddii aad shaqeysay 80 saacadood oo daboolan bishii Maajo, iyo 40 saacadood oo la daboolay bilaha Juun iyo Julaay, ka dibna lumisay 60 saacadood oo la daboolay bishii Ogosto sababtoo ah mid ka mid ah shuruudaha u-qalmitaanka ee kor lagu sharaxay. Sababtoo ah shuruudaha saacadaha shaqada, waxaad xaq u yeelan doontaa wadarta ugu badnaan 80 saacadood ee DARYEELKA PTO. Dacwaddaada bisha Ogosto, waxaad dalban kartaa 60 saacadood (wadarta tirada saacadaha aad lumisay bishaas), oo waxaad heli kartaa 20 saacadood oo aad ku adeegsan karto mustaqbalka, haddii loo baahdo.
Shuruudaha 3: Foomka W-9 ku hayso faylka Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka.
Faa'iidooyinka Carewell SEIU 503 CARES PTO waa canshuur; sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad foomka W-9 ku haysato xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka.
Ogeysiiska waqtiga bixinta
Fadlan u oggolow waqti ka-shaqeysiis dheer. Bmaxaa yeelay faa'iidadan waxaa lagu maalgeliyaa Sharciga DARYEELKA Dowladda Federaalka ee Maarso 2020, waxaa jira shuruudaha xaqiijinta saacadaha dheeriga ah ee manfacan. Tusaale ahaan, sheegashooyinka badankood ee la xareeyay bishii Ogosto waxaa la bixiyay bartamihii Oktoobar.
Sideen ku ogaan karaa haddii aan xaq u leeyahay faa'iidooyinka Carewell SEIU 503 CARES PTO?
Hayso W-9 faylka Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka;
Aad lumisay saacado shaqo oo daboolan inta udhaxeysa Juun 1-Diseembar 31, 2020 mid kamid ah shanta sababood ee hoos ku xusan; iyo
Ka shaqeeyey ugu yaraan 40 saacadood oo daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreeya bisha aad lumisay saacadaha caymiska.
Si aad xaq ugu yeelatid, waa inaad lumisay saacadaha shaqada ee daboolan inta udhaxeysa Juun 1, 2020-Diseembar 31, 2020 mid kamid ah sababaha soo socda:
Waxaad ahayd waxaa kula taliyay xirfadle caafimaad oo aqoon leh in la is karantiilo sababtoo ah soo-gaadhista COVID;
Waxaad siineysaa daryeel shaqsi, kaasoo aad sharci ahaan mas'uul ka tahay ama aad la nooshahay, kaasoo ku xiran karantiil ama amar go'doomin ah xirfadle caafimaad oo aqoon leh; iyo / ama
Waxaad daryeeleysaa ilmo aad sharci ahaan mas'uul katahay dugsigiisa ama xarunta xannaanada cunugga oo loo xiray taxaddarka COVID-19 mana jiraan shaqsiyaad kale oo aqoon leh oo loo heli karo inay daryeelaan ilmahaaga.
Maxay yihiin "saacadaha la daboolay?"
Saacadaha daboolan (sidoo kale loo yaqaan saacadaha shaqada ee uqalma ama saacadaha cutubka gorgortanka) waa saacadaha aad u shaqeysid macmiilkaaga oo ay bixiyaan Acumen, DHS iyo / ama PPL ayagoo ku hadlaya magaca macaamilkaaga.
Immisa saacadood oo faa'iido PTO ah ayaan xaq u leeyahay?
Haddii aad shaqeysay 80 ama in ka badan saacado daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreysa bisha aad lumisay saacado daboolan mid ka mid ah sababaha kor lagu soo sheegay, waxaad xaq u yeelan doontaa illaa 80 saacadood oo ah faa'iidooyinka CARES PTO.
Haddii aad shaqeysay 40-79 saacadood oo daboolan mid ka mid ah saddexda bilood ee ka horreysa bisha aad lumisay saacado daboolan mid ka mid ah sababaha kor lagu sharraxay, waxaad u-qalmi doontaa illaa 40 saacadood oo ah faa'iidooyinka CARES PTO.
Marka, tusaale ahaan, haddii aad lumisay 60 saacadood oo shaqo daboolan bisha Luulyo 2020 mid ka mid ah 5ta sababood awgood, oo aad shaqaysay 80 saacadood oo daboolan bisha Abriil, Maajo, ama Juun, 2020, waxaad xaq u yeelan doontaa 60 saacadood oo ah DARYEELKA PTO.
Tusaale kale, haddii aad lumisay 80 saacadood oo daboolan bisha Luulyo 2020 sababo la xiriira mid ka mid ah 5ta sababood ee u-qalma, oo aad shaqeysay inta u dhexeysa 40-79 saacadood oo la daboolay Abriil, Maajo, ama Juun, 2020, waxaad xaq u yeelan doontaa 40 saacadood oo ah DARYEELKA PTO faa'iidooyinka.
Anna waxay lumisay 14 saacadood oo shaqo ah bishii Juun 2020 maxaa yeelay dhaqtarkeeda ayaa u sheegay inay karantiil noqoto COVID-19 dartii. Sababtoo ah waxay shaqeysay 42 saacadood bishii Maajo, Anna waxay u qalanto ilaa 40 saacadood oo ah Carewell SEIU 503 CARES PTO waxayna codsan kartaa dhamaan 14ka saacadood ee lumay bisha Juun.
Anna waxay ahayd inay go'doomiso bishii Luulyo oo ay wayday 24 saacadood oo shaqo ah bishaas. Thanks to saacadaha shaqadeeda ee May, waxay xaq uleedahay ilaa 40 saacadood oo ah Carewell SEIU 503 CARES PTO. Waxay mar hore sheegatay 14 saacadood Juun, welina waxay u qalantaa illaa 26 saacadood. Anna waxay dalban kartaa dhammaan 24-ka saacadood ee lumay Luulyo.
Ma dalban karaa faa'iidada Carewell SEIU 503 CARES PTO wax ka badan hal jeer?
Haa! Waad codsan kartaa waxtarka bil kasta markaad buuxiso shuruudaha kor ku xusan, laakiin tirada ugu badan ee CARES PTO dheefaha aad xaq u leedahay waa 40 ama 80, iyadoo kuxiran tirada saacadaha daboolan ee aad shaqeysay bilihii ka horreeyay.
Immisa DARYEEL PTO saacadood ayaan dalban karaa haddii aan xareeyo wax kabadan hal codsi?
Haddii aad xaraysato wax kabadan hal dalab oo ah faa'iidooyinka CARES PTO, waxaad xaq u leedahay ugu badnaan saacadaha aad uqalantay sheegashada koowaad laakiin aadan wali helin.
Marka, tusaale ahaan, aan dhahno waxaad shaqeysay 60 saacadood bilaha May, June, iyo July, ka dib waxaad lumisay 30 saacadood bishii Ogos sababo la xiriira mid ka mid ah 5 sababood oo u qalma su'aasha 1. Sababtoo ah saacadaha shaqada ee looga baahan yahay su'aasha 2, waxaad noqon laheyd u-qalma ugu badnaan 40 saacadood oo ah faa'iidooyinka CARES PTO. Dacwaddaada bisha Ogosto, waxaad dalban kartaa illaa 30 saacadood (wadarta guud ee saacadaha aad lumisay bishaas).
Tusaalahan, haddii aad u baahan tahay inaad xareysato sheegasho mustaqbalka, waxaad heli doontaa ugu badnaan 10 saacadood oo aad adigu isticmaali karto - xitaa haddii aad shaqeysay 80 saacadood Sebtember, Oktoobar, iyo Noofambar. Maaddaama sheegashadaadii ugu horreysay (Ogosto), aad u-qalantay ugu badnaan 40 saacadood, taasi waa tirada guud ee saacadaha aad u-qalmi doontid muddada dheeftan ah.
Tusaale kale ayaa ah haddii aad shaqeysay 80 saacadood bishii Maajo, iyo 40 saacadood bilaha Juun iyo Julaay, ka dibna aad lumisay 60 saacadood bishii Ogos sababo la xiriira mid ka mid ah 5 sababood oo u qalma su'aasha 1. Sababtoo ah saacadaha shaqada ee looga baahan yahay su'aasha 2, waxaad noqon lahayd u-qalma ugu badnaan 80 saacadood DARYEELKA PTO. Dacwaddaada bisha Ogosto, waxaad dalban kartaa 60 saacadood (wadarta guud ee saacadaha aad lumisay bishaas), waxaana kuu harsan 20 saacadood oo aad adigu isticmaali doontid mustaqbalka, haddii loo baahdo (iyo haddii aad mar kale buuxiso shuruudaha saacadaha).
Miyaan xaq u leeyahay dheeftan haddii aan qabo calaamadaha COVID-19 oo aan qaatay go'aan ah inaan guriga ka joogo shaqada?
Maya. Si aad ugu qalanto, xirfadle caafimaad ama Oregon Health Authority Contact Tracer waa inuu kuu sheegay is karantiil. Haddii aad kaligaa go'aansatay inaad is karantiil ahaato adigoon amar ama talo bixin xirfadle caafimaad helin, uma qalmi doontid dheeftan.
Miyaan xaq u leeyahay dheeftan haddii daryeel bixiyaha ilmahaygu furnaado / la heli karo laakiin waxaan qaatay go'aan ah inaan gurigooda ku haysto sababo la xiriira walaacyada ku saabsan COVID-19?
Maya. Si aad xaq ugu yeelatid, waa inaadan haysan daryeel cunug oo kugu filan. Haddii aad keligaa go'aansato inaad ilmahaaga ku hayso guriga iyadoon amar dhakhtar caafimaad ama talo bixin ka soo bixin, uma qalmi doontid dheeftan.
Ka waran haddii macmiilkaygu khatar badan yahay oo uu hoos u dhacayo saacadaha shaqada?
Si aad xaq ugu yeelatid faa'iidadan kiiskan, waa inaad lumisay saacado maxaa yeelay macmiilkaaga ayaa u sheegay is-karantiil xirfadle caafimaad. Xaq uma yeelan doontid dheeftan haddii macaamilkaagu uu keligiis go'aan ku gaadho inuu iskiis u go'doomiyo.
Waa maxay xirfadle caafimaad oo aqoon leh?
Xirfadle caafimaad oo aqoon leh ayaa ah bixiye daryeel caafimaad oo shati u leh loona tababbaray bixinta adeegyada caafimaadka. Tan waxaa ka mid ah dhakhaatiirta, kalkaaliyeyaasha dhakhtarka, kalkaaliyayaasha kalkaalisooyinka, iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee diiwaangashan. Ujeeddooyinka faa'iidadan awgeed, La xiriir Raad raacayaasha la shaqeeya maamulka caafimaadka bulshada ee maxalliga ah - sida Maamulka Caafimaadka Oregon - waxaa loo tixgeliyaa xirfadlayaal aqoon u leh.
Waa maxay “shaqsi aqoon leh” markay tahay daryeelka ilmaha?
Shaqsiga aqoonta lihi waa qof weyn oo ruqsad haysta ama aan ruqsad haysan oo aad ku kalsoon tahay inuu siiyo daryeel ammaan ah ilmahaaga. Tan waxaa ka mid noqon kara dugsiga ilmahaaga, daryeel bixiyahooda joogtada ah, xarun daryeel shati, ama xubin qoyska ka tirsan.
Immisa ayaa lay siin doonaa?
Faa'iidada CARES PTO waxaa loo xisaabiyaa isla sida waqtigaaga Lacag La'aanta ah ee caadiga ah loo xisaabiyo. Faa'iidooyinkaaga PTO waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo lagu saleynayo mushaharka aad qaadatay bishii ugu horreysay ee aad u-qalantay - xaaladdan, horaantii Abriil 2020. Bixiyeyaasha daryeelka badankood, kani wuxuu ahaa $15.00 saacaddii.
Haddii aan sheegto manfacyada Carewell SEIU 503 CARES PTO, weli ma sheegan karaa noocyo kale oo dheefaha PTO ah (sida PTO-ga caadiga ah ama dheefaha HTO ee PTO ee la heli jiray horaantii sanadkan)?
Haa! Waad codsan kartaa (waana inaad) dalbaneysaa dhammaan faa'iidooyinka Carewell SEIU 503 PTO ee aad xaq u leedahay, oo ay ku jiraan Regular PTO, iyo Hardship PTO (saacado lumay Maarso 10-Meey 16).
Waraaqo noocee ah ayaan ubaahanahay inaan soo diro si aan u cadeeyo inaan saacado lumay mid kamid ah shanta sharuud ee uqalmitaanka midkood?
Uma baahnid inaad dirto dukumentiyo dheeri ah. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad cadeyso (haddii si kale loo dhigo, ku dhaarid) xaqiiqda ah inaad lumisay saacadaha shaqada ee la cayimay sababta aad u hubisay foomka dalabkaaga waxtarka. Lumintaada saacadaha la daboolay ka dib waxaa xaqiijin doona Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka iyo Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon iyagoo dib u eegi doona kaarkaaga / foojarkaaga.
Kawaran haddii Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka iyo Guddiga Daryeelka Guriga ee Oregon aysan xaqiijin saacadaha iga lumay?
Haddii saacadaha cayiman ee aad shaqaysay ama saacadaha caymiska ee aad seegtay aan la xaqiijin karin, shaqaalaha Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka ayaa kula soo xiriiri doona si ay isugu dayaan una xalliyaan khilaafaadka. Haddii saacadaha la daboolay ee lumay aan lagu xisaabtami karin, macaash qaataha ayaa laga yaabaa inuu mas'uul ka noqdo dib u bixinta macaashka.
COVID-19 Faa'iidooyinka Waqtiga Mushaharka La Siiyo: Ilaa 40 saacadood oo gunooyin ah oo lacag la'aan ah oo la siiyo shaqaalaha u qalma.